अब लेक्चर आोरिएन्टेड हैन; एक्सन ओरिएन्टेड हुनु पर्छ – BRTNepal
अब लेक्चर आोरिएन्टेड हैन; एक्सन ओरिएन्टेड हुनु पर्छ
डा. दुर्गा दाहाल, “अनुभव” २०७५ माघ १६ गते ८:०९ मा प्रकाशित
मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कसरत, व्याख्या र भाषण-भूषणमै झन्डै २९ वर्ष बित्न लागेछन् तर आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू संस्थागत हुनुको सट्टा झन् कन्तबिजोकको स्थिति विद्यमान छ । राजनैतिक दलहरू नितान्त व्यक्तिगत र दलगत नाफा-नोक्सानको अङ्कगणितमै व्यस्त भएर आम जनता र मतदातासँग सम्बन्धित विषयहरूमा बेखबर देखिन्छन् । संविधानको मर्म र अन्तर वस्तु एकातिर छ भने नेताहरू अहिले पनि संसद्मा पौँठेजोरी खेली रहेका छन् ।
खोज्दै नखोजेको धर्मनिरपेक्षता ओढाइएको छ, अधर्मीहरूको निर्देशनमा । नेपाली जनताको इच्छा विपरीत प्रशस्त धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दु राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो ।
दु:खदायी कुरा त के छ भने नेताहरूको भाषण, जुलुस, हडताल र अकर्मण्यताका कारणले देशको दक्ष जनशक्ति र श्रम शक्ति अमेरिका , युरोप र अस्ट्रेलियातर्फ गमन भई रहेको छ भने धर्म र अवैध व्यापारका लागि विदेशी शक्ति नेपालभित्र प्रवेश गरी रहेको छ ।
सरकारले सर्वसाधारणका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकी रहेको छैन । छुवाछुत र गरिबीको मारमा परेर पनि एउटा वर्ग अद्यपरिमित उपेक्षित र अपहेलित हुनु परेको छ । फलतः: , स्वास्थ्य, शिक्षा र निम्न तम आवश्यकता पूरा गर्नकै निमित्त पनि हिन्दुहरूको एउटा हिस्सा इसाई धर्ममा लाग्नु परेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ । राष्ट्रियता र धर्मको नाम जपेर मात्रै त खान, लाउन त पाइँदैन भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु ज़रूरी छ नेताहरूले ।
* के गर्नु पर्‍यो त अब ?
१. नयाँ पुस्तालाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु पर्‍यो ।
२. शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखी स्वस्थ र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु ज़रूरी छ । उक्त क्षेत्रद्वयलाई बेलगाम प्राईवेटाईजेसन गर्न नहुने ।
३. लघु तथा घरेलु उद्योग र उत्पादनमा जोड दिई निर्यात प्रवर्धन र आयात कम गर्ने
५. कृषियोग्य ज़मीनलाई सदुपयोग गरी उत्पादन बढाउनु पर्ने
६. बेरोजगार हरूका लागि औद्योगिक रोजगारीको सिर्जना गरी विदेश जान बाट रोक्नु पर्ने
८. मुलुकमा पर्यटन उद्योगलाई बढाउने र अधिकतम सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटकहरू भित्र्याउने
९. कर्मचारी हरूलाई आफ्नो दायित्व, काम र कर्तव्य प्रति बफादार र इमानदार बनाई घुसखोरी र भ्रष्टाचार बाट जोगाउने । सो कार्यका लागि नेताहरू खुद सप्रिनु पर्ने आदि-इत्यादि ।
अतः: खासगरि नेताहरू र हामी सबैहरू अब लेक्चर ओरिएन्टेड हैन; एक्सन ओरिएंटेड हुनु ज़रूरी छ । विदेशका विकसित मुलुकका नेता, कार्यकर्ता र जनताले कुरा कम र काम बढी गर्छन् र द्रुत तर विकास संभवपर भएको छ । भाषण सुनेर अथवा सुनाएर दिनभरि आफ्नो र अरू सबैको समय बिगार्नु भन्दा योजना र कार्यक्रम बनाएर/लिएर गाऊँ मुखी हुनु उत्पादनमूलक हुनेछ भने रोजगार पनि वृद्धि हुनेछ ।
( प्रा. डा. दुर्गा दाहाल नेपाली काँग्रेसका प्राक्तन केन्द्रीय प्रशिक्षक र नेजस अमेरिकाका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ )
बिचार :उर्लाबारी, लन्डन र डीडी
बिचार :नेपालका हजुरआमा-हजुरबा र अमेरिकाका नाति- नातिनीहरू
Phone, Computer, Social Media and Internet should be handled very carefully
साहित्यको खोल ओड़नेहरु